राजपालाई नै भोट किन? :: सुजिता कार्की :: Setopati
राजपालाई नै भोट किन?
म जनतामा उत्साह देखिरहेको छु। म जहाँ पनि गइरहेको छु, उनीहरूको उत्साह देखिरहेको छु। सबै महिलादेखि पुरुषसम्म, जवानदेखि वृद्धसम्म सबैले आर्शिवाद दिएका छन्। तपाईलाई जिताउँछु भनेका छन्।यो उद्गारबाट तपाईहरू के निष्कर्ष निकाल्नुस्, हामीलाई चाहिँ सामान्य वातावरण छ। गाउँदेखि सहर बजार सबै ठाउँमा सहज छ।
जलेश्वर एउटा पुरानो ठाउँ हो। यो सबै कालमा सरकारको प्रशासनिक स्थान हो। तर यसको हालत हेर्दा, भित्री वार्डमा पुग्दा, नाली, दुर्गन्ध, लामखुट्टे छ। यहाँका मानिस डेंगु, औँलोले लगायतको बिमारी परिरहन्छन्। सडकको हालत यस्तै छ। जनकपुर जलेश्वर सडकको अवस्था एकदम जीर्ण छ, जर्जर छ। र धूलोले परिसान दिइरहेछ। यो महत्त्वपूर्ण सडक हो। यो सडकको निर्माणमा ढिलासुस्ती छ। यहाँ बाढी र डुबानको समस्या छ।
यहाँ धेरै समस्या छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत पछाडि पर्यो। पत्रिकामा यो २ नम्बर प्रदेश स्वास्थ्यमा धेरै पछाडि भएको कुरा आएको छ। किनकि सरकार सधैँ उदासिन छ। हुलाकी सडक बनाउने भनेको चर्चा छ। तर काम भइरहेको छैन।
यो प्रशासनिक ढिलासुस्स्तीले हो कि? अर्थको अभावले हो कि? दिन प्रतिदिन महोत्तरी गरीबीमा छ। गरीबीको देशकै दोस्रो नम्बरमा छ। सारा स्रोतसाधन सबै उसैको हातमा छ। उही पुरानै ढङ्गले मधेसलाई हेरिएको छ। सिकार खेल्ने स्थान, मनोरञ्जन स्थानको रुपमा लिइन्छ। मधेसीको चेहरामा नेपालीपन कहिले अनुभूत गर्न सकेन राज्यले। त्यसले पनि थुप्रै समस्या ल्याएको छ। अझ हाम्रो शासन प्रशासन, सुरक्षा, न्याय सेवामा मधेसीको उपस्थिति न्यून छ।
यो आजभोलिका सबै समस्या गाउँगाउँमा पुगिसेको छ। सबैलाई थाहा भइसेको छ। यसको समाधान, सम्बोधन चाहन्छ मधेस।
यहाँ रोजगार चाहिन्छ। यसका लागि बाहिर जानुपरेको छ। आफ्नो घर परिवारलाई कसैले छोड्न चाहँदैन तर बाध्य भएर रोजगार, पढाइका लागि बाहिर जानुपर्छ। त हाम्रो यहाँ के भइरहेका छ, यो सब हाम्रो आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ। चाहेको आवाज यहाँ आवाज उठाउँदा गोली हालिन्छ। उठायो भने मुद्दा हालिन्छ।
जनताबाट हामी यही सुनेका छौँ। गोली खाएका अपांग भएका मानिसहरू देख्दा बडो दुःख लाग्छ। किन, आफ्नो अधिकार माग्दा यस्तो दुर्दशा भएको हो। यो सब समस्याको चाहन्छन् उनीहरू। उनीहरू हामीलाई यस सम्बन्धमा ध्यान दिन अनुरोध गरिरहेछन्। जनताका धेरै इच्छा आकांक्षा छ हामीसँग।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर ५, २०७४, ०६:१६:४५
कांग्रेस महासमिति बैठक २ दिन लम्बिने
‘महासचिवले पद खुस्केको थाहा नपाउने पार्टी’
न्यायपरिषदले गर्‍यो उत्कृष्ट ४ न्यायाधीश घोषणा